ပြသခြင်းတွင် Podcast လှုပ်ရှားမှု 2019 | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
မှာနထေိုငျ ရိုအခါရေယုံ Creek အဘိဓါန်ဟိုတယ် Orlando တွင်ဖလော်ရီဒါရှိအဖြစ် podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ 2019 (PM19) ဆဲတတ်၏။ သူတို့ကယခုနှစ်အကြီးဆုံး podcasting ဖြစ်ရပ်များထဲကတစ်ခုတက်ရောက်ရန်အံ့သောငှါစည်းဝေးအဖြစ်အနည်းငယ်တိုတောင်းနာရီအတွင်း, ဤအရပ်ဌာနကိုအသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံကနေ podcast နှင့်အတူစည်ကားလိမ့်မည်။ သင်တစ်ဦး Podcasts င်သို့မဟုတ်တဦးတည်းဖြစ်ဖို့ရှာနေလျှင်, ညနေ 19 ဖြစ်ဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဤတွင် Podcasts, ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါလိမ့်ပူးပေါင်းလျက်, podcasting အသိုင်းအဝိုင်းအချို့အကြီးမားဆုံးနှင့်သြဇာအရှိဆုံးအမည်များကနေလေ့လာသင်ယူမည်!
ဒါအမှန်ပဲ! ငါးတက်သောကြာနေ့မှီတိုင်အောင်ရှိသမျှသောလမ်းမှယနေ့စတင်ကာ PM19 အားဖြင့်တည်ခင်းဧည်ပါလိမ့်မယ် TED ကိုရေဒီယိုနာရီရဲ့ Guy Razနှင့် 4,000 ကျော်တက်ကြွသူတို့အဘယ်သူမျှမ Podcasts လက်လွတ်ချင်ပါလိမ့်မယ်သုံးနှစ်ခွဲရက်ညတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ဖြစ်လတံ့သောအရာကိုအဘို့အလှည့်ပတ်ကိုစုသိမ်းကဲ့သို့ခပ်သိမ်းသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ Podcasts, စက်မှုလုပ်ငန်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့် podcasting အပြစ်တွေအယောင်ဆောင်အတူ။
ညနေ 19 aspiring ရုံ စတင်. နှစ်ဦးစလုံး Podcasts, များအတွက်ဟော့စပေါ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မဆိုသင်ကသာမန်အတူတကွ Podcast တခုကိုစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူကောင်းကြီးမင်္ဂလာလျက်ရှိသည်အရှိဆုံးဖန်တီးမှုအသံအချို့ကိုဆောင်ကြဉ်းလာ Podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့'S မစ်ရှင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ထို့နောက်အတူတူသင့်ရဲ့အသံနဲ့မိုက်ခရိုဖုန်းရဖို့ရှာကြသည်လျှင်။
သာ pm တွင် 19 မှာသငျသညျဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်ကဲ့သို့သောအရှိဆုံးအံ့သြဖွယ် podcasting ခွက်အချို့ထံမှသင်ယူဖို့အခွင့်အလမ်းရလိမ့်မယ် Shannon Cason, Nigel ညံ့ဖျင်းနှင့် အာရုန်သည် Mahnke, အဘယ်သူသည်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အများအပြားအကြီးအအနုပညာရှင်တွေအတူ, အားလုံး Podcasts Podcast တခုကို၏ဖန်တီးမှုကနေအထိအံ့သြဖွယ်သင်ခန်းစာများမှတဆင့်၎င်းတို့၏ podcasts တွေကိုကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကူညီပေးနေအတွက်အာရုံစူးစိုက်, 100 ပြောရမှာပို့ချချက်, breakout အစည်းအဝေးများနှင့် panel ကဆွေးနွေးမှုများကျော်၌ဟောပြောစည်းလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြ ဘယ်လိုစက်မှုလုပ်ငန်း podcast တခုကိုမှငွေရရှိအောင်ဘယ်လိုအကျင့်လျှင်, စည်းလုံးညီညွတ်မှ podcasts လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့'S မစ်ရှင်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဖုံးလွှမ်းလာအောင်နှိုးဆွခြင်း, တစ်ဦးသံသယမရှိဘဲ, podcasts ရဲ့နောက်မျိုးဆက်အပေါ်ဆောင်ကြဉ်းပါလိမ့်မယ်များစွာကိုပိုပြီးအံ့သြဖွယ်အကြောင်းအရာများ။
မှတ်ပုံတင်ခြင်း နေဆဲပွင့်လင်းဖြစ်တယ်, သင်ဆဲအချိန်ရှိသည်။ သင်တစ်ဦး Podcasts င်သို့မဟုတ်တဦးတည်းဖြစ်ဖို့ရှာနေလျှင်ဒါဆိုကိုကြားခံရဖို့အသေခံမယ့်ကြောင်းကိုစကားသံကိုအပေါ်ကိုပြန်ကိုင်ကြပါဘူး။ ကိုသွားပါ 2019.podcastmovement.com နှင့်အခါရေယုံ Creek အဘိဓါန်ဟိုတယ်ဆင်းပေါ် လာ. , က podcasting သာကမ္ဘာကြီးကိုရောက်ရှိဖို့နဲ့သူတို့ရဲ့အသံကိုကူညီနိုင်မထူးခြားတဲ့အသံတစ်အဆက်မပြတ်ကြီးထွားလာအသိုင်းအဝိုင်းသည်အဘယ်အရာ၏အဟောင်းနှင့်အသစ်အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးစလုံးကြိုဆိုဖို့ပြင်ဆင်အဖြစ် pm တွင် 19 ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ pm တွင် 19 မှာသင်မြင်ပါလိမ့်မယ်!